पढौं, बुझौं: सबै भन्दा ठूलो महाव्रत र महातप ! | Citizen Post News
एउटा गाँउमा जानकी नामकी बुढी आमा बस्थिन् । उनको छोरा बुहारी शहरमा बसोबास गर्थे । तर उनलाई गाँउ छोड़ने मन भएन । त्यसैले उनी एक्लो नै बस्थिन् । उनी सधैं झैं मन्दिर गएर फर्किदै थिइन् । बाटोमा उनको सन्तुलन बिग्रेर लडिन्।
गाँउलेहरुले उनलाई उठाएर पानी पिलाए र सम्झाएँ अब यो अवस्थामा एक्लै रहन उचित हुदैन । कुनै एउटा छोरासँग जाउ । जानकीले पनि परिस्थितिलाई स्वीकार गर्दै छोरा बुहारीलाई लिएर जानको लागि फोन गर्ने मन बनाइन् ।
जानकीका तीन जना बुहारी थिए । सबभन्दा ठूली सविता थिइन्, उनी आज्ञाकारी थिइन् । माइली रिमा आज्ञाकारी तथा समझदार पनि थिइन् । कान्छी सुष्मा जो अलि छुच्चो स्वभावकी थिइन् ।
जानकी अति धार्मिक थिइन् । कुनै व्रत तिहार आउँदा पहिला नै तीनै जना बुहारिहरुलाई सचेत गराउथिन् । सविता खुशीखुशी व्रत गर्थिन् । रिमाले पनि मान्थिन तर कान्छी बुहारी सुष्माले एक कानले सुनेर अर्को कानबाट उडाउँथिन् या विरोध गर्थिन् । 'हजुरले हर पर्वमा व्रत राख्न लगाएर मेरो आनन्दलाई कष्टमा परिवर्तित गर्नु हुन्छ।'
जानकी भन्थिन्,'तेरो मुखमुखे लाग्ने आदत छ । केही व्रत उपासना गर । अगाडी बढछेस ।' दुवैको कुनै न कुनै कुरामा बहस हुन्थ्यो। रिसमा एक दिन जानकीले भनिन्,'तैले के ठानेकी छेस्, बुढेस कालमा तेरो जरुरत पर्छ भन्ठानेकी छेस, राम्ररी सुन, म सड्छु तसँग आउन्न।'
अब सबभन्दा पहिला उनले सवितालाई फोन गरिन् । उनले भनिन्,'बाटोमा लडें । आजकल धेरै पटक लडी रहन्छु । सोचे तसँग आउँ ।' सविताले भनिन, 'नवरात्रीमा ? अहिले होइन आमा । नाङ्गो खुट्टा हिड्छु आजकल । कसैले छोएको पनि खान्न।'
रिमालाई पनि फोन गरिन् उनले पनि बहाना बनाएर टाढिइन् । जब सविता र रिमाले हात उठाए त सुष्मालाई फोन गर्नुको कुनै फायदा थिएन । र, उनको अहंम अहिले टुटेको थियो तर खतम भएको थिएन । फोनमाथि हात राखेर आउने कठिन समयको कल्पना गर्न लागेकी थिइन् ।
त्यहीबेला फोनको घण्टी बज्यो । आवाज़बाट नै चिनिनकी सुष्मा हो । 'आमा लड्नु भयो हैन ? हजुरले त केही भन्नु भएन तर मैंले पनि मान्छे लगाएकी थिएँ । नाति आउँदैछ लिनको लागी ।'
सासु: 'के तलाई मेरो शब्द याद छैन ?'
सुष्मा: 'जिन्दगी भर भुल्दिन । हजुरले भन्नु भएको थियो कि सड्छु तर पनि तसँग जान्न् ।' त्यहि दिन मैले ब्रत लिएकी थिएँ । यी बुढीलाई सडन दिन्न । मेरो तप अब शुरू हुन्छ । किनकी बचपनमा मलाई मेरी आमाले यो शिक्षा दिनु भएको थियो कि बुढेस कालमा सासु-ससुराको सेवा गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो महाव्रत र महातप हुन्छ ।
शिक्षाः म स्वयम् भावुक हूँ, हजुरहरुलाई के शिक्षा दिउँ ? कथा पढेर हजुरहरुले स्वयम् जान्नु हुन्छ । व्रत र तप के हो ? श्राद्ध र तर्पण के हो ? मरेपछि त कसैले पनि गर्छ । जीवितमा गर्यो भने त्यो शूरता र वीरता हुन्छ । #गणेशजी